Tilmaama Piriimer Liigii - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama Piriimer Liigii
Darbii Kaaba Landan Sanbata baayyee eegamurratti gurmaa'inaan Tootinhaam Arsenaal deebiyaa jajjabaataa jiru caala. Garuu Ispaarsi booree Istaadiyeemii Eemireetisitti yeroo darbe irra ga'e deebifatuu laata?
Ogeessi Ispoortii BBC Maark Laawuronsaan akka jedhutti: "Tootinhaam erga mo'amanii amma tureera. Taphoota hunumaa keessaa 11 injifataniiru waan ta'eef haala gaariirra jiru.
"Barana Arsenaal taphoota Piriimeer Liigii 13 dirreesaa ala taasise keessaa sadii qofa mo'ate. Kanaaf, kan amma Wanbileetti taphachuuf jiran dabalatee kan irratti yaaduu qaban."
Madda suuraa, BBC Sport
Arsenaal Piiyeer-Emeerik Abamaayaangiifi Heneerik Mikitaariyaan waliin amma carraa goolii lakkoofsisuu baayyee gaarii uumuu ni danda'a garuu ittisuurratti jabina agariisaa hin jiran.
Ittisa Tootinhaam darbuun caalaa cimaadha, ammuma sanas garee morkataa isaammoo ce'ee cabsuus ni danda'a.
Tilmaama Laawuroo: 2-0
Everten v Kiristaal Paalaas
Everten tooftaan isaanii baayyee dogoggora akka ta'e tapha darbe Arsenaaliin mo'amanirratti mullateera. Kiristaal Palaas garuu tapha Niiwuu Kasil waliin taasiserraa carraa mo'achuu hedduun turellee qabxii tokko argateera.
Paalaas of eeggachuu qabu sababiin isaa qabxii sadii qofaan naannoo gadi bu'uurraa fagaatanii kan jiran. Taphoota sadiifi ykn afuriif ykn isaa gadiinillee osoo hin mo'iin itti fufnaan warra sadarkaa dhumaa sadanii gaditti of argu.
Tilmaama Laawuroo: 2-1
Istook v Biraayitan
Barmiingihaam turban darbe Weesti Haamiin mo'achuun gareewwan warra dhumaa ja'an keessaa akka ba'an waan taasiseef bu'aa gaarii ture. Amma sadarkaa 13ffaa irratti argamu.
Istookis Boornimaawuziin 1-0 dursaa turanii mo'amanillee ammayyu haala gaariirra jiru.
Tilmaama Laawuroo: 1-1
Siwaansii v Barnilee
Kaarloos Karvaalhaal waliin Siwaansiin jajjabaachaa jira. Kan yeroo darbe Leester waliin waliqixa ba'an dabalatee erga inni gaggeessuu jalqabee taphoota shanirraa qabxii 10 aragatniiru.
Barnileen erga mo'atanii turullee, kun ni jijjiirama jedheen yaada, Laawuroon.
Tilmaama Laawuroo: 0-2
Weesti Haam v Waatfoordii
Wixata darbe Waatifoordi Chelsii irratti injifannoo guddaa argateera.
Weesti Haam ammallee Maarkoo Arnaatovich miidhamallee kan deebuu danda'u akkasumas Paatirik Eviraa dhuma turban kanaa mallateesse kan jalqabu ta'us rakkoo keessa jiru.
Tilmaama Laawuroo: 1-0
Maachister Siitii v Leester (17:30 GMT)
Taphataan qarqaraa Leester Riyaad Mahaareez tapha Siitii kana irratti hin hiriiru.
Maachester Siitiin torban darbe Barnilee waliin taphateen gara dandeettii agarsiisaa turetti deebiya.
Hadersifiildi v Boornimaz (12:00 GMT)
Hadersifiildi FA Cup milkaa'aa jiraatanillee Piriimeer Liigiitiin tophoota shan walitti aansanii mo'amuun warraa dhumaa lama keessaaa tokkodha.
Faallaa kanaan Boornimaawooz taphoota baayyee osoo hin mo'amiin dhufanii amma sadarkaa saglaffaarraa
Niwuukasil v Maan Utd (14:15 GMT)
Niwuukasil Onkoloollessa darberraa kaasee hin mo'anne. Yaaliin amma foyyessuuf istaadiyeemii Jaamsi Paarkitti taasisanis milkaa'uufii dhiisuu mala. Maanchester Yunaayitid turban darbe Hadersifiildiin salphaatti mo'ate Niwukasiliif hin laafu.
Saawuuzhamiten v Liiverpuul (16:30 GMT)
Amajii kanattaa £75m kan Liiverpuulitti makame Virjil van Daayik attamitti akka simatamu simatamu arguun nama gammachiisa. Sababiin isaa rakkoon Liiverpuul tapha tochuurratti waan ta'eef.
Boqonnaa dura sirriitti taphatanis turban darbe Tootinhaam waliin boqonnaa booda rakkoo ta'annaatiin laafanii mullatan.
Chelsii v Weesti Biroom (20:00 GMT)
Leenjisaa Chelsii Antooniyoo Konteef waan jiru amma gaarii miti. Akka oduun dhaga'amaa jirutti taphattoonni leenjii isaatti akka gammadaa hin jirredha.
Sadarkaa bu'aatiirraa qabxii afur qofa fagaatanii jiranillee Westi Biroomis baayyee Chelsii dura dhaabbachuu dadhabuu malu.
B/J Tafarraan 'heera biyyattii humnaan diiguuf' shakkamuun mana murtii dhihaatan
20 Caamsaa 2022
Raadiyoo qalbii dargaggoo hawwachuuf ‘marroo hedduu waan nagaa lallabu’
Dhaamsi 'Yunaayitid kosiidha' jedhu mul’achuu hordofee BBC’n dhiifama gaafate
Biyyoonni 24 maaliif loltoota isaanii gara Mozaambikiitti ergan?